Colaadda Tigray :- Soo Laba Kaclaynta TPLF Iyo Madax Xanuunka Uyaala Abiy Axmad | Gaaroodi News
Colaadda Tigray :- Soo Laba Kaclaynta TPLF Iyo Madax Xanuunka Uyaala Abiy Axmad
July 3, 2021 | Published by: Tifaaftiraha
Dib u qabsashadii magaalada Mekelle ee xoogagga Tigray ayaa waxay fallaagadu u tahay guul muhiim ah oo ay gaareen siddeedii bilood ee u socday dagaalka waqooyiga Itoobiya, kaas oo ay ku dhinteen kummannaan qof, malaayiin kalana u horseeday inay u baahdaan mucaawino cunto. Ma laga yabaa in tallaabadani ay dagaalka u yeesho waji kale?
Dowladda Itoobiya ayaa ciidamadeeda kala baxday gobolka kadib dagaallo bilo socday, taas oo dhalisay dabaaldegyo ka dhacay waddooyinka caasimadda gobolka Tigray.
Ra’iiisal wasaare Abiy Axmed ayaa markii hore sheegay in ka bixitaanku uu ahaa talaabo istiraatiiji ah maxaa yeelay magaalada hadda wixii ka dambeeya ma noqon karto “xarun dagaal oo muhiim sii ah”, Balse markii dambe wuxuu xaqiijiyay inay tahay in laga fogaanayo khasaara kale oo hor leh.
“Waxaan aragnay isbedel aad u weyn oo ku yimid dagaalka,” ayuu yiri Will Davison, oo ah falanqeeye sare oo ku sugan dalka Itoobiya kana tirsan Kooxda Xasaradaha Caalamiga.
“Waxay muujineysaa in dowladda dhexe aysan awoodin inay qabsato Mekelle, ama ay garwaaqsatay inay dani ugu jirto inay ka baxaan gobolka. Taasi waxay ahayd marka la eego guulaha muhiimka ah ee laga gaaray dagaalka”
Hay’adaha bani’aadamnimada ayaa ka digay dhibaatooyinka ka dhalan kara dagaalka haddii aanan la kordhin gargaarka oo aan si dhakhse leh loola gaarin.
Colaadda ka huraysa Amxaarada
Khubarada ayaa sheegaya in hogaamiyaha Itoobiya hada wixii ka dambeeya uu diiradda saari doono waxa ka dhacaya galbeedka Tigray, iyo khilaafka u dhexeeya kacdoonka Tigreega iyo ciidamada ka socda gobolka dariska la ah ee Amxaarada.
Amxaarada waxay ka mid tahay qowmiyadaha ugu waaweyn dalka Itoobiya. Dhulka barwaaqada ah ee ku teedsan xadka gobolka uu la wadaago Tigreega muddo dheer ayaa lagu murmaayay oo ciidamada gobolka Amxaarada iyo maleeshiyooyinka ayaa isku dayaya inay dib u hantaan qaar ka mid ah dhulkaas.
Iain McDermott, oo ah falanqeeye ka tirsan kooxda la talinta amniga ee ‘International Group’ ayaa yiri “Garabka Amxaarada ee Barwaaqada waa mid ka mid ah labada xisbi ee ugu awooda badan .”
Mr Davison ayaa sheegay inay jirto sabab kale oo dawlada dhexe ay diiradda u saarto gobolka Axmaarada oo xuduud la wadaaga dalka Suudaan.
Awoodda ciidamada oo sii yaraanayso
Waxa aan cadeyn ilaa hadda waa heerka uu gaarsiisanyahay awooda militariga Itoobiya sideedii bilood ee lasoo dhaafay ee dagaalka.
Jabhadda ayaa sheegatay inay dhowaan “dhexdhexaad ka dhigtay” tobanaan kun oo askarta Itoobiya ah weerarkii ay ku qaadday bishii Juun. Ma aysan cadeyn in taasi ay la micno tahay in askartaas la dilay ama loo qabtay maxaabiis dagaal, balse si kasta oo ay ahaataba, qasaaraha soo gaaray Ciidanka Difaaca Qaranka Itoobiya ayaa umuuqda mid culus.
Alex de Waal, oo ah agaasimaha fulinta ee hay’adda samafalka World Peace Foundation ee sal-dhigeedu yahay magaalada Boston ee dalka Maraykanka, wuxuu sheegay in ENDF “wuxuu ahaa ciidan ka kooban 20 qaybood – toddobo gebi ahaanba waa la burburiyey, saddexna waxay ku jiraan xaalad burbursan”.
“Waa mid ka mid ah su’aalaha milyan-doollarka ah,” ayuu yidhi Mr Davison. Runtii ma ogin laakiin waxaan u maleynayaa inay tahay sawir qurux badan oo walwal gelinaya ciidamada federaalka. Waxaa jira hoos u dhac weyn iyo waliba niyad jab.
“Marka la barbardhigo maqaamkeedii hore ee Itoobiya oo ahayd nabad ilaaliye gobol oo aad loo qiimeeyo, militarigeedu hadda si aad ah ayuu u liitaa, “ayuu raaciyay.
Waxa hubaal ah in itoobiya qarashka uga baxay dagaalka uu ahaa mid aad u badan.
Cadaadiska Beesha caalamka ee sii kordhaya
Talaabooyinka xiga ee Mr Abiy waxaa si dhaw isha ugu hayn doona beesha caalamka oo muddo badan walaac ka muujinayay dhibaatada loo geysanayo dadka shacabka ah ee Tigray.
Saraakiisha Qaramada Midoobey ayaa sheegaya in colaaddii dhawaan ka dhadcay gobolka Tigreeda ee dalka Itoobiya ay sababtay macaluul saameyn weyn ku yeelatay qiyaastii 400,000 oo qof.
Kulan uu xalay arrinta gobolka Tigray ka yeeshay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa laga sheegay in ay suurtagal tahay in colaad hor leh ay halkaasi ka dhacdo, inkastoo horraantii usbuucan ay dowladda Itoobiya ku dhawaaqday xabbad joojin hal dhinac ah.
Ku simaha madaxa gargaarka bani’aadamnimada ee Qaramada Midoobay, Ramesh Rajasingham, ayaa Golaha Amniga u sheegay in xaaladda Tigray ay aad u xumaatay toddobaadyadii la soo dhaafay.
Xog kale oo ku saabsan dhibaatada Tigray:
Dowlado shisheeye oo ay kamid yihiin maamulka Biden ee Washington ayaa cadaadis saaraya xukuumadda Adisababa si loo hubiyo in xaaladda amni ee Tigray ay soo hagaagayso, taas oo u ogolaanaysa in gargaar la gaarsiiyo malaayiinta qof ee u dhimanaya cuntada la’aanta.
Haddii aysan hagaagin, “Itoobiya iyo Ereteriya waa inay ka sii fiirsadaan tallaabooyin kale,” ayuu yiri Robert Godec, ku xigeenka xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika. “Ma istaagi doonno dagaalka naxdinta leh ee ka jira gobolka Tigray.”
Ciidamada Eriteria ee ka dagaalamay gobolka Tigray
Ra’iisel wasaaraha Itoobiya ayaa horay u qirtay in ciidamo ka socda dalka ay deriska yihiin ee Eritrea ay ku sugan yihiin gobolka Tigreega ka dib dagaalkii bishii November.Muddo bilo ah ayay labada dalba beeninayeen in ciidammadaasi ay ka gudbeen xadka.
Abiy Ahmed ayaa u sheegay mudanayaasha baarlamaanka in ciidamada Eriteriya ay yimaaddeen iyagoo ka baqaya in ay weeraro uga yomaaddaan dagaalyahanada gobolka ee Tigray. Iska hor imaadkan ayaa bilawday kadib markii Jabhada Xoreynta Dadka Tigreega (TPLF) ay qabsatay xarumo ciidan oo kuyaala gobolka.
Xasilooni darrada ka jirta guud ahaan Geeska Afrika ma ahan wax cusub, balse waxaa jira cabsi laga qabo in xaaladda ka sii daraysa ee Itoobiya ay saameyn ku yeelato dhammaan gobollada.
Illaa iyo hadda, Raiisel wasaare Abiy ayaa xukunka haya. Laakiin haddii taasi isbedesho, cawaaqib xumadu waxay noqon kartaa mid masiibo leh, ayuu yidhi Mr Davison.
In ka badan 350,000 oo qof ayaa wajahaya xaalado macluul, iyadoo qiyaastii 5 milyan ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah